Идеи за градински кладенец-цветарник | Art senses – идеи за дома и градината
16.03.2019 Posted by: အနုပညာ Senses
ပန်းဥယျာဉ်တစ်ခုအတွက်ဒီအတွေးအခေါ်များသည်ပုံမှန်ခြံဝင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်တော့သည့်အတွက်အနုပညာရည်ရွယ်ချက်အသစ်တစ်ခုမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းပြသသည်။ အလှဆင်ထားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တည်ဆောက်ထားသည်ဖြစ်စေတည်ဆောက်ထားသည်ဖြစ်စေရေတွင်းကိုပန်းနံ့နှင့်အပင်အမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုးရန်နေရာအဖြစ်အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ရေရရှိနိုင်မှုကိုဂန္ထဝင်စက်မှုစနစ်ထက်လျှပ်စစ်စုပ်စက်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်လျှင်ပင်၎င်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏လက်တွေ့ကျသောဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲအံ့သြဖွယ်ဥယျာဉ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဥယျာဉ်၌ရေတွင်းတစ်တွင်းဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများများစွာရှိပါတယ်နှင့်ဖြစ်နိုင်သောဖျော်ဖြေပွဲရာပေါင်းများစွာ။ ပုံသဏ္,ာန်၊ အရွယ်အစား၊ ပစ္စည်းများသည်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ရရှိနိုင်သောကုန်ကြမ်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ကျောက်တုံး၊ သစ်သား၊ အုတ်များ၊ အခြားဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်ပြုလုပ်ထားသောစတုရန်း၊ ကားအဟောင်းတွေ၊ ရေတွင်း ပန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးသောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာနှင့်ရေအကြားဆက်နွယ်မှုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အပင်အားလုံး၏သက်တမ်းအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်၏ထင်ရှားသောအမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်ပန်းပွင့်များ၏အလှဆင်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းသည်ကျယ်ပြန့်သောကန့်သတ်ချက်များအတွင်းကွဲပြားနိုင်သည်၊ နောက်ဆုံးရုပ်ပုံသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအကောင်အထည်ဖော်မှုဥပမာများသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများအဖြစ်အစေခံနိုင်သည်။
ပန်းပွင့်နှင့်အတူဥယျာဉ်တော်, ကောင်းစွာဥယျာဉ်, အလှဆင်ကောင်းစွာ, သင့်ရဲ့ခြံဆင်းသက်ဖို့ဘယ်လို, ကောင်းပါတယ်, ပန်းပွင့်နှင့်အတူကောင်းစွာ, ဥယျာဉ် Landscaping, ခြံထဲမှာ Landscaping, ပန်းပွင့်, ရေတွင်းထဲမှာပန်းပွင့်, အိမ်မှာစိတ်ကူးများ, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, ပရိဘောဂ, အတွင်းပိုင်းစိတ်ကူးများ, ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများ, ခေတ်သစ်အိမ်, အလှဆင်အတွေးအခေါ်များ, အနုပညာစိတ်ကူးများ
ဥယျာဉ်တော်၌အလှဆင်ဘို့လတ်ဆတ်သောစိတ်ကူးများ။ လှပသောပုံနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအကြံပြုချက်များ ...
ထိုနေ့၏အစွန်အဖျား! ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီနေ့ရက်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်! မွှေးသော bil နှင့်ရေခဲ Cube များကိုအေးခဲအောင်လုပ်ပါ။
ပလတ်စတစ်ကြက်ဥသေတ္တာများမှအနုပညာပန်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်လွယ်ကူပါသလား။ အဖြေမှာ ...
House ပန်းပွင့် - Hoya သို့မဟုတ်ကြွေပန်းပွင့်
အလှဆုံးမိုးလုံလေလုံပန်းများအနက်တစ်ခုမှာ Hoya (Porcelain Flower or Wax ဟုလည်းခေါ်သည်) ဖြစ်သည်။